Ny famerenenan'i Hulu 'Hellraiser' Reboot dia mandavo vava hoy i David S. Goyer - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny famerenenan'i Hulu 'Hellraiser' Reboot dia mandavo vava hoy i David S. Goyer
Ny famerenenan'i Hulu 'Hellraiser' Reboot dia mandavo vava hoy i David S. Goyer
Ny maha-te hahafanta-javatra antsika dia ho legendary na dia any amin'ny helo aza
by Trey Hilburn III Septambra 14, 2021 4,624 hevitra
Ho avy i Hulu Hellraiser manaitra toy ny helo. Ny talenta mifamatotra amin'ilay zavatra dia tena manome toky. David Bruckner dia tao amin'ny lisitry ny faves niverina hatrizay Ny famantarana. Vao avy nanohy nandeha niaraka tamin'ireo entana izy. Ny trano alina ary The Ritual Samy niavaka sy nampivadi-po tokoa. Ka iza no mahay mitantana a Hellraiser avereno. ny Hellraiser izany dia "valanoranon'ny valanorano" hoy ny mpamokatra, David S. Goyer.
“Holazaiko fa niverina tany amin'ny novella tany am-boalohany izahay ho an'ireo loharano nalaina, tena manome voninahitra ny sanganasan'i Clive izahay. Azoko lazaina fa genius i David Bruckner. Sarimihetsika izao. Mampatahotra sy mahatalanjona ilay sary, ary midina valanoranom-bato ny Cenobites. ” Nilaza tamin'i Collider i Goyer.
Tiako i Bruckner mandray am-pahamatorana ny fitaovana. Ny hevitra hoe hiverina any Clive Barker's izy Ny fon'ny helo dia vaovao mahafinaritra ary tena mila henon'ny mpankafy.
Ny roa voalohany Hellraiser Mahatalanjona ny sarimihetsika ary nihanihany sy nandrahona mandraka androany. Noho izany, misy zavatra betsaka tokony hiainana. Mandeha any Serbia ny fakana sary amin'izao fotoana izao miaraka amina tanjona ny famotsorana an'i Hulu amin'ny 2022.
Faly ve ianao a Hellraiser reboot avy any Bruckner? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.